Qadar - BBC News Somali
Posted at 17:53 4 Oktoobar 202117:53 4 Oktoobar 2021
Posted at 17:14 1 Oktoobar 202117:14 1 Oktoobar 2021
"Taalibaan annaga hanaga barato sida loogu dhaqmo shareecada Islaamka"
Qadar ayaa door muhiim ah ka cayaartay in wada hadal lala bilaabo Taliban. Balse haatan Qadar waxay niyad xumo ka muujisay hannaanka Taliban kaddib markii ay la wareegeen Afghanistan.
Posted at 16:08 10 Luulyo 202116:08 10 Luulyo 2021
Khilaafka labada dal ee walaalaha ah ee horseeday in uu sare u kaco qiimaha shidaalka adduunka
Waxaa soo if baxay khilaafka iyo xiisadda ka dhex taagan Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo in muddo ah xulafo ahaa, khilaafkan ayaa ka bilowday shirkii OPEC ee dhawaan uu u qabtay Ururka waddammada dhoofiya shidaalka iyo waddamada kale ee soo saara saliidda.
Posted at 3:36 7 Maajo 20213:36 7 Maajo 2021
Posted at 10:24 3 Maajo 202110:24 3 Maajo 2021
Mac-hadka Qaramada Midoobay u qaabilsan tababarada iyo cilmi-baarista (UNITAR) ayaa Dr Mutlaq u aqoonsaday inuu yahay dhexdhexaadiyaha ugu wanaagsanaa sanadkii 2020.
Posted at 17:07 6 Jannaayo 202117:07 6 Jannaayo 2021
Sacuudiga iyo xulafadiisa oo la heshiiyay Qadar
Dowladaha ayaa isku afgartay in "xurgufta ka dhaxeysa ay dhinac iska dhigaan" kaddib markii ay isugu tageen shirka dalalka khaliijka, sida uu sheegay wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga.
Posted at 8:05 5 Jannaayo 20218:05 5 Jannaayo 2021
Maxaa hadda ku soo beegay xayiraadda uu Sacuudigu ka qaadayo Qadar?
Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuwait ayaa sheegay in Sacuudiga uu xudduudihiisa u furi doono Qadar, taasoo soo afjareysa xiisaddii u dhaxaysay labada dal.
Posted at 2:47 26 Oktoobar 20202:47 26 Oktoobar 2020
Baaritaanka ayaa salka ku hayay canug markaa dhashay oo looga tegay suuli ku yaal garoonka.
Posted at 6:55 6 Febraayo 20206:55 6 Febraayo 2020
Ilma yar oo si la yaab leh ugu dhex dhashay diyaarad hawada ku jirtay
Haweeney dhakhtarad ahayd oo la socotay diyaarad hawada ku jirta ayaa ka dhalisay gabar ku dhex foolatay.